Mmiri mmiri ozuzo nke dị ebe ugwu na ugwu ugwu, gịnị kpatara ya ji sie ike karịa? | Netwọk Mgbasa Ozi
Atụmatụ ụwa nke ugbu a nke thermohaline
Nyochaa eserese ụwa zuru oke mmiri ozuzo anyị nwere ike ịlele ọtụtụ n'ime mmiri ozuzo nke ebe okpomọkụ ha na-eme na ugwu ugwu. Palmyra Atoll, na oke ala nke 6 degrees n'ebe ugwu, na-anata gburugburu 445 cm nke mmiri ozuzo kwa afọ, ebe ọzọ, nke dị n'otu ohere dị na ndịda nke ekwuru, na-enweta naanị 114 cm.
Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ọ bụ akụkụ nke geometry nke mbara ala ụwa, n'ihi na efere mmiri dị n'oké osimiri na-agbagọ agbagọ dị ka mbara ala na-agbagharị, na-eme ka mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo na-aga n'akụkụ ugwu nke ikuku. Mana mmuta ohuru nke Mahadum Washington n’egosiputara anyi na ihe kpatara ya bu n’ihi oke osimiri nke emenyere n’osisi, otutu puku kilomita.
Isiokwu ahụ, nke e bipụtara na October 20 na Nature, na-akọwa otu n'ime njirimara njirimara nke ihu igwe, ma na-egosi na mmiri mmiri na-acha na-emetụta oge mmiri ozuzo, dị oke mkpa maka uto ọka na mpaghara dịka mpaghara Afrika Sahel na ndịda India.
Ke ofụri ofụri, ndị kacha ekpo ọkụ ugbu ebe ndị ọzọ iru mmiri n’ihi na ikuku na-ekpo ọkụ na-arị elu ngwa ngwa na mmiri ọ nwere precipitates.
Mmiri ozuzo a na-apụta karịa na ugwu ụwa n'ihi na ọ na-ekpo ọkụ. Ajụjụ bụ, kedu ihe na-eme ka Ugwu Ugwu dị ọkụ karị? Achọpụtala na ọ bụ n'ihi oke osimiri na-ekesa.
Ndị nduzi nke ọmụmụ ihe a (Frierson n'etiti ndị ọzọ) jiri nkọwa zuru ezu nke Satellites nke Radiant Energy System nke andwa na sgwé ojii nke NASA (CERES), iji chọpụta na ìhè anyanwụ na-egosi oke enyemaka nke okpomọkụ na mpaghara ndịda. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị echebara radieshon nke ikuku ihu igwe, mpaghara ndịda kwesịrị ịbụ iru mmiri.
Iji nyocha iji chọpụta njem ụgbọ mmiri nke oke osimiri na iji usoro kọmputa iji gosipụta ọrụ dị mkpa nke nnukwu thermohaline ugbu a nke na-ekpu nso Greenland, na-aga n'oké osimiri ahụ ruo Antarctica, wee gbagoo ma na-asọpụ n'ebe ugwu. Ọ bụrụ na anyị ewepụ ugbu a, ụyọkọ mmiri ozuzo ga-adịgide na mpaghara ndịda.
Nke a bụ n'ihi na mgbe mmiri na-ekesa ugwu ruo ọtụtụ iri afọ, ọ na-eji nwayọ nwayọ, na-ewepụ ihe dị ka puku ijeri watts 400 nke ike site n'akụkụ ndịda na mpaghara ugwu na akuku ikuku.
Ruo ọtụtụ afọ, mkpọda nke oké osimiri abụrụwo ihe a nakweere maka asymmetry na oké ifufe nke ebe okpomọkụ. Ma n'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị nchọpụta ewereghị nkọwa a dị ka nke ziri ezi n'ihi na ọ bụ arụmụka gbagwojuru anya na ọ na-abụkarị maka omume zuru ụwa ọnụ dịka nke a, enwere nkọwa dị mfe.
Ugbu a ha kpebisiri ike na ọ bụ ọrụ mere ka ọha na eze mara na fim ahụ "Thebọchị na-esote echi", bụ nke a na-ekwu na nke a bụ nke a kpọrọ mgbasa thermohaline akwụsị ịgba oyi New York. A na-atụghị anya na mkpofu na mberede agaghị atụ anya dị ka ihe nkiri ahụ, mana a na-atụ anya mbelata nwayọ, nke United Nations na-atụ anya ya ma na-atụ anya maka afọ 2100, nke a nwere ike ịgbanwe mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ na ndịda, dịka o yiri ka ọ na-egosi site na ndekọ ndekọ ala nke mere n'oge gara aga.
Eburu amụma na ịdalata ugbua dị ka ndị a: mgbe mmụba na mmiri, mmiri ọhụrụ, na ịda na North Atlantic ga-ebelata njupụta nke mmiri oke osimiri, nke a ga-adị ntakịrị karịa ọ ga-abụ na ọ ga-adị ala karịa.
Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe akaebe pụtara na 10-15 afọ gara aga na-egosi etu ịdị mkpa dị elu si dị mkpa maka ndị ọzọ nke ụwa.
Ọrụ Frierson gara aga na-egosi otu mgbanwe mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ n’etiti oke osimiri si emetụta mmiri ozuzo. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya site n'aka ya na ndị ọrụ ya na-ele anya etu mmetọ sitere na Industrial Revolution gbochiri ìhè anyanwụ site na mgbago ugwu n'oge 70 na 80s wee gbanwee mmiri ozuzo nke dị na ndịda.
Ọtụtụ mgbanwe na nso nso a bụ n'ihi mmetọ. Ọdịnihu ga-adabere na mmetọ ikuku na okpomoku ụwa, yana mgbanwe nrugharị nke oke osimiri. Ihe ndị a niile na-eme ka oke mmiri ozuzo sie ike ịkọ.
Ozi ndi ozo: Obi ịda mba nke iri nke oge a na-esite na Ọwara Oké Osimiri Mexico, Okpomoku nke uwa a o kwụsịla ruo mgbe ebighi ebi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mmiri ozuzo nke udu mmiri na ugwu ugwu, gini kpatara ya ji na-akawanye njọ?
Igwe ojii mmiri ozuzo buru ibu, na-adị ogologo oge n'ihi mmetọ